मन्त्रिपरिषद‍्लाई पूर्णता दिने तयारीमा देउवा, प्रकाशमानको नाम चर्चामा | Ratopati
सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिने तयारी
personलोकेन्द्र भट्ट exploreकाठमाडौं access_timeमाघ ३, २०७८ chat_bubble_outline0
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्त्रिपरिषद्का साथै आफ्नो सचिवालयलाई पूर्णता दिने तयारीमा जुटेका छन् । केही दिनयता प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् र सचिवालयलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल थालेका छन् । देउवा सचिवालयका अनुसार एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद् र सचिवालयलाई पूर्णता दिने गरी छलफल थालिएको छ । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री भएका देउवाले असोज २२ मा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिएका थिए । तर यो बीचमा दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गजेन्द्र हमाल र रक्षामन्त्री मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि दुई मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको हो । सोही मन्त्रालयमा देउवाले नयाँ नियुक्ति गरेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन लागेका हुन् ।
मन्त्रालय हत्याउन सत्तारुढ दलमा हानथाप
प्रकाशमानको नाम चर्चामा
देउवाले यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल थालेको पाइएको छ । शनिबार अपरान्ह नेता प्रकाशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएका थिए । सिंह काठमाडौंका जिल्ला काँग्रेस सभापति सबुज बानियाँलाई साथमा लिएर बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा र सिंहबीच करिब १ घण्टा छलफल भएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने क्रममा महाधिवेशनमा सिंहले लगाएको गुन तिर्न देउवा तयार देखिएका छन् । सिंह समर्थन पाएपछि दोस्रो चरणबाट सभापतिमा दोहोरिन सफल भएका थिए । यतिबेला देउवाले सिंहलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा ल्याउन चाहेका बुझिएको छ । सिंह सरकारमा सहभागी नभएको खण्डमा उनको सिफारिसमा राजन केसीलाई मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
सिंह मन्त्री बन्न तयार भए उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने सम्भावना छ । वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी दिने सकिने विषयमा पनि देउवाले छलफल थालेको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । यस विषयमा खाण पनि सकारात्मक नै रहेको नेताहरु बताउँछन् । देउवाले सिंहलाई कुनै न कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने योजना बनाएको पाइएको छ । सरकारमा सहभागी नहुने भए संसदीय मोर्चा सम्हाल्न पनि देउवाले सिंहलाई प्रस्ताव गरेका थिए । विजय कुमार गच्छदारको सांसद पद निलम्बन भएपछि काँग्रेस संसदीय दलको उपनेता छैन । तर देउवासँग संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरेकाले सिंह उपनेता हुने सम्भावना करिब छैन ।
उनले देउवाको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेका थिए । तर मन्त्री बन्ने विषयमा भने सिंह सकारात्मक नै रहेको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । यता नेता सिंहको सचिवालयले भने मन्त्री हुने कुरामा सत्यता नरहेको जिकिर गरेको छ ।
सिंहका प्रेस संयोजक युपी लामिछानेका अनुसार शनिबारको छलफलमा पार्टीलाई विधिसम्मत चलाउने विषयमा मात्रै कुराकानी भएको थियो । उनले भने, ‘मन्त्री बन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन । शनिबारको छलफलमा पार्टीलाई विधिसम्मत सञ्चालन गर्ने विषयमा मात्र छलफल भएको हो । अरु सबै हल्ला हुन्,’ उनले रातोपाटीलाई भने ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा को–को जाँदैछन् ?
यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले सचिवालयलाई समेत पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् । सरकार बनेको ६ महिना हुँदा उनले सचिवालयमा तीन जनालाई मात्र नियुक्त गरेका छन् । जसअनुसार प्रमुख स्वकीय सचिवमा देउवाले भानु देउवालाई नियुक्त गरेका छन् भने प्रशासनिक सल्लाहकारमा जनार्दन नेपाल र स्वास्थ्य सल्लाहकारमा प्रा.डा.आरपी विच्छा नियुक्त भएका छन् ।
अब भने देउवा सचिवालयलाई पूर्णता दिनेगरी प्रमुख सहयोगीको खोजीमा जुटेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा प्रकाशशरण महतलाई नियुक्त गर्ने तयारी छ । १४ औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा पराजित महतलाई देउवाले अब सरकारको कामसँग जोड्न राजनीतिक सल्लाहकार बनाउन लागेको बुझिएको छ ।
आर्थिक मामिला सल्लाहकारमा अर्थविद डा. पोषराज पाण्डेको नाम चर्चामा छ । यस्तै प्रेस सल्लाहकार गेजा शर्मा वाग्ले बन्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनअघि बालुवाटार बोलाएर शर्मालाई प्रेस सल्लाहकारको प्रस्ताव राखेको थिए ।
शर्मालाई प्रेस सल्लाहकार बन्न प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरेको बालुवाटार स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दिएकाे छ। शर्मा प्रेस सल्लाहकार बन्ने भएपछि गोविन्द परियारले प्रेस संयोजका रुपमा काम गर्ने भएका छन् । अघिल्लो कार्यकालमा पनि उनी देउवाको प्रेस संयोजक थिए । यसपटक परियार प्रेस सल्लाहकार भएर काम गर्ने चाहन्थे । यता प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले पनि प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारमा आकांक्षा देखाएका थिए ।
बद्रीलाई प्रेस सल्लाहकार मानेर परियार प्रेस संयोजकमा बस्ने अवस्था नआएपछि शर्मालाई बनाउन लागिएको बालुवाटार स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । अब सिग्देललाई जनसम्पर्क सल्लाहकार बनाउने तयारी गरिएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको फोटोग्राफरका रुपमा रोशन सापकोटाले काम गरिरहेका छन् । राससमा कार्यरत सापकोटाले आगामी दिनमा पनि सोही भूमिकामा काम गर्ने बुझिएको छ । प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार र विकास विज्ञ कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । यस्तै प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र सल्लाहकारमा डा. दिनेश भट्टराईको चर्चा छ । तर उनले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले आफूसँग कुनै कुराकानी नगरको रातोपाटीलाई बताए ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार पूर्व पराराष्ट्रमन्त्री महत र विदेश मामिलाका जानकार शर्माबाटै देउवाले परराष्ट्र सल्लाहकारको काम गराउने योजना बनाएका छन् ।
परराष्ट्र सल्लाहकार हुने इच्छा देखाएका शर्मालाई देउवाले सचिवालयमा हुँदा सबै काम हुने बताएका थिए । ‘तपाईं प्रेस सल्लाहकार भइदिनुस् । सचिवालयमा हुँदा परराष्ट्रको काम पनि गर्न सकिन्छ । तपाईं बस्न चाँहि प्रेस सल्लाहकार बस्नस्,’ देउवाले शर्मालाई भनेका थिए । शर्मा देउवाका यसअघिका कार्यकालमा पनि सचिवालयमा बसेर काम गरेका व्यक्ति हुन् ।